Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်တည်လာပုံ (သို့မဟုတ်) ဘင်္ဂါလီ ခေါ်တောကုလားများ အသွင်ပြောင်းခြင်း
ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်တည်လာပုံ (သို့မဟုတ်) ဘင်္ဂါလီ ခေါ်တောကုလားများ အသွင်ပြောင်းခြင်း
By James Mmt on Saturday, May 5, 2012 at 7:33pm
ရိုဟင်ဂျာ…. ရိုဟင်ဂျာ…… ဒီနာမည်က ခေတ်စားလာတာ မကြားသေးတဲ့ နာမည် တစ်ခုပေါ့….. တိတိ ပပ ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော ဒေသမှာ နေထိုင်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကိုယ်တိုင် သူတို့ကို ကမ္ဘာက ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်တယ် ဆိုတာတွေ၊ သူတို့ကို ပြပီး ဒေါ်လာတွေ သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့ချီပီး လုပ်စားနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိတယ် ဆိုတာ သူတို့တွေ မသိကြပါဘူး…… ဒါက ပကတိ အခြေအနေ…..
သမိုင်းအစဉ်အဆက် ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားသည့် ရခိုင်လူမျိုးစု သင်္ကေတနှင့် ၀တ်စားဆင်ယင်မှု
မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အင်္ဂလိပ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို နှစ် ၁၀၀ ကျော် ကျွန်ပြု အုပ်ချုပ်သွားခဲ့တာ တစ်ကမ္ဘာလုံး အသိဖြစ်ပါတယ်….. ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလွန် အင်မတန် စည်းစနစ် ကြီးမားပီး စာရင်းနဲ့ ဇယားနဲ့ အုပ်ချုပ်တ့ အင်္ဂလိပ် အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်း တစ်လျှောက်လုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စကားလုံး စာသား လုံးဝ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်စိုးစဉ် ကာလ တလျှောက်လုံးမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ လူမျိုးဆိုတာ လုံးဝကို မရှိခဲ့ကြောင်း သက်သေခံနေပါတယ်…..
စေတီ ပုထိုးတို့နှင့် ပဏာရနေသည် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးဒေသ
အင်္ဂလိပ်တို့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာများမှာ ရခိုင်ဒေသမှာ နေထိုင်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်တဲ့ အခြားသော တိုင်းရင်းသားတွေကို အတိအကျ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ တစ်ခုထဲသာ မပါရှိတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မျာ သမိုင်းမှတ်တမ်းအရ တကယ်မရှိခဲ့သော လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်…. ဒါဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘယ်ကလာသလဲ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ မေးစရာ ရှိလာပါတယ်…. လွတ်လပ်ရေး မရခင်အထိ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မရှိခဲ့တာကို အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး မှတ်တမ်းတွေက သက်သေခံပီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာဆိုသော စကားလုံးဟာ လွတ်လပ်ရေး ရပီးမှ ပေါ်ထွန်းလာတယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရရန် ကြိုးပန်းနေစဉ် အချိန်ကာလနဲ့ အပြိုင် အိန္ဒိယဟာလည်း အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေ ခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့စဉ် အင်္ဂလိပ်ကနေ ခွဲထွက်ပီး ပါကစ္စတန် နိုင်ငံအနေနဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်ရေး တောင်းဆိုဖို့ အလီဂျင်းနားတို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်…. အဲ့ဒိအချိန်မှာ မူဂျာဟစ် စစ်သွေးကြွတွေဟာ ပါကစ္စတန် လွတ်လပ်ရေး တောင်းဆိုစဉ် ရခိုင်ဒေသကိုပါ ပါကစ္စတန်၏ နယ်နိမိတ်တွင် ထည့်သွင်းရန် အလီဂျင်းနားကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်….. မိုဟာမက် အလီဂျင်းနားဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခင်မင်လေးစားသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက် ၎င်းတို့ရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်လျောပဲ ရခိုင်ဒေသဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တစ်သားတည်း ရှိတာကို အသိအမှတ် ပြုခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်…..
အဲ့ဒိအတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပီး များမကြာခင်မှာပဲ ရခိုင်ဒေသကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ပီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ ပူးပေါင်းရန်၊ သို့မဟုတ် လွတ်လပ်သော အာရကန် အစ္စလာမ်မစ် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဟု နာမည်ပေးထားသော၊ ရခိုင်ဒေသအား မြန်မာနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်ပီး သီးခြား လွတ်လပ်သော အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတ နိုင်ငံတည်ထောင်ရန် မူဂျာဟစ်တို့ ကြွေးကျော်ပီး ရခိုင်လူမျိုးတို့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြို့ရွာတွေကို အပိုင်သိမ်း နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုကျင့်လာပါတော့တယ်……
အဲ့ဒါနဲ့ မရှေးမနှောင်းမှာပဲ ဘင်္ဂလားဘက်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို အခြေချနေထိုင်တဲ့ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးတွေနဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေကြား လူမျိုးရေး ပိဠိပက္ခတွေ များပြားလာပီး နောက်ပိုင်းမှာမှ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ အစပျိုးလာခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာသည် မူဂျာဟစ် သောင်းကျန်းမှု၊ ဘင်္ဂလားဘက်မှ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ကူးပြောင်း လာကြသူများနဲ့ ပါတ်သက်နေတယ် ဆိုတာကို သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
ဒီနေရာမှာ ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ သမိုင်းနဲ့ချီပီးရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်းကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး….. ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ အင်မတန်မှ ယဉ်ကျေးမှု မြင့်မားခဲ့တဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပြီး သမိုင်းကြောင်း တလျှောက်မှာ ဘာသာတရားကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာ မြောက်ဦးမှာ တွေ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်း ရာနဲ့ချီပြီး ရှိနေတဲ့ စေတီပုထိုးတော်များက သက်သေခံပါတယ်….. အခုထက်ထိလည်း ဝေသာလီမြို့ဟောင်းတို့ ပြန်လည်တူးဖော်နေစဉ်မှာ ရခိုင်လူမျိုးတို့ရဲ့ ရှေးခေတ် သမိုင်းကြောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများသာ တူးဖော်ရရှိနေပြီး ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သမိုင်းသက်သေ မတွေ့ရခြင်းကလည်း အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာတို့ သမိုင်းလိမ်ခြင်းကို ဖော်ပြနေပါတယ်….
ဒါဖြင့် ယဉ်ကျေးတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ကုလားဆိုတဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ ဘာကြောင့် အမြင်မကြည်လင်တာလဲ မေးစရာရှိပါတယ်…. ရွာလုံးကျွတ်၊ မြို့လုံးကျွတ် လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မူဂျာဟစ် သူပုန်တွေကို သူတို့ မမေ့နိုင်ပါဘူး….. အဆိုပါ မူဂျာဟစ်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ ကုလားဆိုရင် ကြည့်မရကြတာ ဖြစ်ပါတယ်…. ထပ်မံပြောစရာရှိသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပင်လယ်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်ဖြစ်ပါတယ်….. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဟာ အလွန်မှ ရှည်လျားပြီး ကျယ်ပြောတဲ့အတွက် အာရပ်တွေ သင်္ဘောပျက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လာသောင်တင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ လွန်စွာမှပင် ရီစရာ ဖြစ်နေပါတယ်…..
ရခိုင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဓါတ်ပုံ
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတစ်ဦး၏ ဓါတ်ပုံ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လူမျိုးစု ဓါတ်ပုံ
အာရပ်တွေဟာ လှေသင်္ဘောပျက်လို့ ရခိုင် ကမ်းရိုးတန်းကို ရောက်လာပီးမှ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ သမိုင်း ဖြစ်တည်လာတယ် ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့စကားဟာ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ အခြားသော နေရာတွေမှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မတွေ့ရခြင်းကလည်း ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ဘယ်ကလာဆိုတာကို အဖြေထုတ်ပီးသား ဖြစ်နေပါတယ်… အဆိုပါ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် မည်သည့်နေရာမှာမှ လူမျိုးရေး ပြဿနာမျှ မရှိပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေသော ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဒေသတ၀ိုက်မှာပဲ အဆိုပါပြဿနာတွေ ဖြစ်တည်နေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ ဘယ်က မြစ်ဖြားခံတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ ရနိုင်ပါတယ်……
ဒီနေရာမှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ သမိုင်းအတုတွေနဲ့ လိမ်လည်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ရာမှာ မအောင်မြင်တဲ့အတွက် ဦးနုလက်ထက်က အာဏာငန်းဖမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသားရေး သစ္စာဖောက်မှုကို ရှေ့တန်းတင်လို့ ပွဲထုတ်လာပြန်ပါတယ်…… အာဏာရရေးသာ ရှေးရှုခဲ့တဲ့ ဦးနုဟာ ရှေ့နောက်ကို မဆင်ခြင်ပဲ ရခိုင်ဒေသမှာ ဘာသာရေးအရ လူဦးရေ ကန့်သတ်ခြင်းကို အားမပေးတဲ့အတွက် ၀က် သားပေါက်သလို ပေါက်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတွေစီက မဲ ရရေး တစ်ခုတည်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ သမိုင်းမှတ်တမ်း အချိုးအကွေ့လေး တစ်ခုမှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…. နဂိုကတည်းက သမိုင်းမှတ်တမ်း မရှိတဲ့ လူမျိုးကို အာဏာ ငန်းဖမ်းမှု တစ်ခုအတွက် ဦးနု အစိုးရက အသိအမှတ်ပြုခဲ့တာသာ ဖြစ်ပါတယ်….. မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ လက်ခံခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး…..
အချုပ်အားဖြင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဖွား တိုင်းရင်းသားများ မဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ တရားမ၀င် ကျူးကျော်ဝင်ရောက် နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားများ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
၁။ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က အုပ်ချုပ်သော မှတ်တမ်း မှတ်ရာများတွင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် စာလုံး မပါရှိခြင်း…..
၂။ အင်္ဂလိပ်တို့ အုပ်စိုးစဉ်က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သည့် အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် လူမျိုးများ စာရင်းတွင် ကြောက်မက်ဖွယ် လူဦးရေများပြားသည့် ရိုဟင်ဂျာသည် ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ဖောပြမှု အလျဉ်းမရှိခဲ့ခြင်း၊
၃။ အလီဂျင်းနားအား ပါကစ္စတန်ကို အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ ခွဲထွက်ရန် တောင်းဆိုလျင် ဌာနေရင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ရခိုင်လူမျိုးတို့အား ပစ်ပယ်၍ ရခိုင်ဒေသအား ထည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုခြင်း၊
၄။ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးပေးစဉ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခွဲထွက်၍ ပါကစ္စတန်နှင့် ပူးပေါင်းရန် ကြိုးပန်းခဲ့သည့် မူဂျာဟစ်များသာ ဖြစ်ခြင်း၊
၅။ ရိုဟင်ဂျာတို့ ဖော်ထုတ်လာသည့် ၎င်းတို့၏ သမိုင်းကြောင်းများတွင် မူဂျာဟစ်များကို ပစ်ပယ်မထားနိုင်ခြင်း၊
၆။ ရိုင်ဟင်ဂျာတို့၏ အဖွဲ့အစည် ဖြစ်သည့် Rohingya Solidarity Organisation (RSO) ၏ ရည်မှန်းချက်သည် မူဂျာဟစ်တို့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော အစ္စလာမ်မစ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ရခိုင်ဒေသ ဟူသော Islamic autonomous Rakhine (Arakan) state ရည်မှန်းချက်ခြင်း တူညီနေခြင်း။
၇။ ရှည်လျားသည့် မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်း တလျှောက်တွင် အဆိုပါ ပြဿနာမရှိပဲ ရခိုင်ဒေသတွင်သာ အဆိုပါ ပြဿနာ ဖြစ်တည်နေခြင်း၊
၈။ ရခိုင်ဒေသတွင်ပင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီး တစ်ခုလုံး မဟုတ်ပဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် ထိစပ်နေသော ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော့ ဒေသတ၀ိုက်တွင်သာ ဖြစ်တည်နေခြင်း၊
၉။ အင်္ဂလိပ်တို့ လွတ်လပ်ရေး ပေးစဉ်က တိုင်းရင်းသား စာရင်းတွင် ပါဝင်ခြင်း မရှိပဲ ဦးနုလက်ထက်မှသာ သတ်မှတ်ဖော်ပြခံရခြင်း၊
၁၀။ တစ်ဘက်နိုင်ငံ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လူမျိုးများနဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတို့မှာ လူပုံပန်းသဏ္ဍန် ခွဲခြားမရအောင် တူညီခြင်း၊ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူ၊ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ ထပ်တူကျနေသည့်အပြင် ပြောဆိုသုံးနှုန်းသည့် ဘာသာရပ်ပါ အချို့နေရာတွင် တူညီနေခြင်း၊
၁၁။ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ရှေးရာဇ၀င် သမိုင်းကြောင်း မြို့ဟောင်းများအား တူးဖော်ရာတွင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာနှင့် ပါတ်သက်သည့် အထောက်အထားများ မတွေ့ရခြင်း၊
၁၂။ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပန်းမှု သမိုင်းဖြစ်စဉ်တွင် မည်သည့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ သူရဲကောင်း တစ်ယောက်မျှ မပါဝင်ခြင်း၊
အစရှိသည်တို့ကို လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါတယ်……. သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်လုံခြုံရေး အားနည်းမှုကို အခွင့်အရေး တစ်ရပ်အနေဖြင့် အသုံးချ၍ တစ်ဘက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာပြီး တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး တောင်းဆိုရန် ရည်ရွယ်၍ ပွဲထုတ်လာသည့် အဆိုပါ ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် လူမျိုးစု စကားလုံးသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂါလီများ ဖြစ်သည်ကို အတိအကျ သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သမိုင်းကို လိမ်ရုံမျှမက လူမျိုးစုကိုပါ လိမ်လည်၍ နိုင်ငံဖြစ်တည်ရန် ကြိုးပန်းလာသည့် အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီများ သမိုင်းကြောင်း ဇတ်လမ်းများ ရှေ့နောက် မညီခြင်းမှလည်း သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သာစွဌာနေ ရခိုင်ဒေသမှ ရှစ်သောင်း ပုထိုးတော်ကြီး
သို့ဖြစ်သည့်အတွက် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် နေထိုင်သည့် လူမျိုးစု တစ်ခုမဟုတ်ပဲ တစ်ဘက်နိုင်ငံမှ ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာသည့် ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသူများသာ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist at 12:25 AM
Labels: ဓာတ်ပုံ, သမိုင်းဆိုင်ရာ, ဆောင်းပါး
ရိုဟင်ဂျာ ဖြစ်တည်လာပုံ (သို့မဟုတ်) ဘင်္ဂါလီများ အသွင်ပြောင်းခြင်း
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်မှာ ခေါ်တောကုလား ဆိုတာမပါလို့ စိတ်မကောင်းဘူး ကျေးဇူးပြုပြီးဖြည့်စွက်ပေးပါ
အဲဒီ ကုလားတွေ ယုတ်မာတာတွေကိုလည်း ရေးပေးပါဦး